युद्ध राज्य चाहन्छ, हामीले चाहेको होइन – महासचिव विप्लव - चौतारीपोष्ट अनलाईन
जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, एनसेललाई त कारबाही मात्र गरेको कुरा हो । नेपाली जनताले साथ दिन्छन् भने यो एनसेललाई नेपालबाटै खारेज गर्नुपर्दछ । हामी एउटा अभियान चलाउन खोज्दैछौँ । एनसेललाई बहिष्कार गर्नुपर्दछ । फोन गर्दा एनटीसीबाट गर्नुहोस्, एनसेललाई खारेज गर्नुहोस् । नेपाल टेलिकम छँदैछ नि । एनसेललाई बहिष्कार गरेर देशबाट लखेट्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत छ । अब एउटा बहसको कुरा त छँदैछ।
अर्कातिर कोसी बाँधबाट पीडितहरूको रिपोर्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ २७ हजार बिघा जनताको जमिनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । ७ हजार बिघा जमिनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । ९ लाख क्युसेक घनमिटर पानी थामिरहेको कोसी बाँधको क्षमता दुईदेखि २.५० घनमिटर पानी थाम्ने मात्र छ। यो बाँध जति बेला पनि भत्किनसक्ने खतरा छ । आतङ्कित भएका जनता धर्नामा बसेका छन्, सरकारले सुनेको छैन । तर भारत सरकारले उच्च कोसीबाँधका निम्ति पहल मात्र होइन, दबाबसमेत गरेको भन्ने समाचार पनि आएका छन् । उच्च बाँध बन्यो भने भोजपुर र धनकुटाको केही भाग, सङ्खुवासभाको ठूलो तल्लो भेग डुबानमा पर्ने र त्यो बाँध फुट्यो भने मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्ला पूरै खण्डहर हुने खतरा छ । त्यहाँका जनता आतङ्कित छन् । राष्ट्रियताका निम्ति पनि लडेको पार्टी हुनुको नाताले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले एनसेलको कुरा गर्यौँ । त्यत्तिकै गम्भीर विषय हो यो पनि राष्ट्रका निम्ति । पहिलो कुरा जुन कोसीको चलिरहेको बाँध छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासमा गरेको ठूलो भुल थियो । यो ठुलो गद्दारी थियो । यो हामीले भन्दै आएको कुरा हो । हामीले यसको खारेजीको माग पनि गर्दै आएका छौँ । त्यतिबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले जुन बदमासी गरे, आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि गरेको भुल हो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अथवा एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा सर्न खोज्ने बेलामा भारतले अथवा जुनसुकै साम्राज्यवादी मुलुकले फाइदा उठाउँछ । भारतले पनि फाइदा उठाएको हो । त्यतिबेला राणाबाट बहुदलमा आउने बेलाको सङ्क्रमणको फाइदा उठाएर कोसी–गण्डक सम्झौता गरायो। यो कुरा व्यावहारिक रूपले हेर्दा भावनात्मक वा राजनीतिक रूपले हेर्दा कति कुरूप किसिमको छ । कति गलत र खतरनाक छ भने नेपालको जमिनमा भारतले बाँध लगाउने, नेपालको भूमिमा भारतले नहर खनेर भारततिर लैजाने, नेपाल डुबानमा पर्ने, डुबेर ध्वस्त हुने । फेरि पानी सबै भारततिर लिएर नेपालमा सुख्खा खँडेरी बेर्होने । नेपालमाथि भएको यस्तो विचित्र खालको राष्ट्रघाती सम्झौता हो । अब गण्डकको हालत त्यही छ सुस्तामा । १२ किलोमिटर नेपालको जमिनमा नेपालमा गण्डक नहर छ तर सबै पानी भारत जान्छ । हिउँदमा पानी चाहिएको बेलामा नेपाल सुख्खा हुन्छ । वर्षामा पूरै डुबानमा पर्छ । यस्तो खालको इन्जिनियरिङ गरिएको छ । यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता इतिहासमा भए । त्यसैविरुद्ध त जनयुद्ध भयो र क्रान्ति भयो । यसमा जनताले साथ दिए तर नेताहरूले धोका दिए । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि राजतन्त्र र यहाँका पुँजीवादीहरूबीचको टकरावमा त्यतिबेलाका माओवादीहरू पनि संलग्न भएको शान्तिकालमा फेरि अर्को खेल खेलियो । अरुण पनि कब्जा गरियो र कर्णाली पनि कब्जा गरियो । त्यही शृङ्खलामा अहिले कोसी उच्च बाँधको कुरा आइरहेको छ । अहिले नेपालका भूगर्भशास्त्रीहरू विभिन्न खालका विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले के भनेका छन् भने यो नेपालका लागि घातक छ । यो एउटा हाइड्रोजन बमजस्तो हुन्छ । फुट्यो भने नेपाल ध्वस्त हुन्छ । चुरे कमजोर पहाड हो, बलियो पहाड छैन । चुरेमा त्यत्रो पानी जम्मा गरेर नेपाललाई ध्वस्त पार्ने योजना बनाइँदैछ । भारतको संयुक्त नदी निर्माणको जुन योजना छ बृहत् योजना, त्यहीँ नदी जोडेर मिसाउने कुरा छ । त्यो योजना लाद्न खोजिएको छ, त्यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन । हामीले त्यही विषयमा विभिन्न खालका कार्यक्रम गर्यौँ र बहस गर्याैँ । विराटनगर, सुनसरी, धरान चतरामा हामीले ठूलाठूला बहस गर्याैँ । त्यही गर्दा हाम्रा साथीहरूलाई गिरफ्तार गरियो । मुद्दा लगाइयो । हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने त्यो बाँध नेपालको हितमा छैन । पर्यावरणीय दृष्टिले पनि मानिसहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट बोलिरहेका छन्– त्यो नेपालको हितमा छैन । जनताको माग जायज छ । हामी पनि त्यसको विरोधमा छौँ ।
हामीले अहिले सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण नगर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ । क्रान्ति हामी गर्छौं, सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्दैनौँ भनेको कुरामा के भ्रम छ त ? यस विषयमा प्रस्ट हुन चाहने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छाैँ भने सबै क्रान्तिहरूमा पुष्टि भएको एउटा सत्य के हो भने राज्यसत्ता परिवर्तन नभए कसैका समस्या समाधान हुन सम्भव छैन । मलाई लाग्छ, नेपाल आर्मीको पनि समस्या समाधान हुन सम्भव छैन । प्रहरीको पनि त्यस्तै हो । अब प्रहरीको सबै देखिइहाल्यो । अब भन्नुहोस्, सुडानको डार्फोरमा जुत्ता किनेको घाममा पग्लियो रे । लुगा किनेको पोल्यो रे । गाडी किनेको खुम्चियो रे । अहिले त्यो मुद्दामा रमेश चन्दलाई जेल हालेका छन् । त्यतिबेला त माके– एमाले सबै मिलेर खाएका हुन् नि । कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । खाने बेलामा सबैले खाए । अहिले एउटा प्रहरीको प्रमुखलाई जेल हालेका छन् । छ–सातजना प्रमुखलाई त मुद्दा छ । कोहीकोही चोखिँदैछन् । कोही पर्दैछन् । प्रहरीभित्र कति अन्याय छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ नि । पहिले शमशेरगन्जमा विद्रोह नै भएको होइन त ? त्यतिबेला रासनको समस्याले गर्दा विद्रोह गरेका प्रहरीहरू अहिलेसम्म जेलमा छन् । हामीले गर्ने भनेको क्रान्ति कुनै राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका लागि होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजका लागि हो । क्रान्ति त सेना र प्रहरीका लागि पनि हो । सबै नागरिकका लागि हो। सेना र प्रहरी पनि नागरिक हुन् । हिजो तपाईंहरूले जसलाई बचाउन खोज्नुभयो ती सबै ढले किनकि तिनीहरू जनताको इच्छाविपरीत थिए। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने आज पनि यो सत्ता जनताको होइन । हाम्रो कुरा सत्तालाई फाल्ने हो । तपाईंहरूले कुरा बुझ्नुभयो भने लेनिनले जारशाहीका सोलोखोपहरूसँग सहकार्य गरेजस्तो गरौँ । हामीले सीधै भनेका छाैँ तपाईंहरू आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ । हाम्रो अहिले गोली हान्ने, ब्यारेकमा ड्याङडुङ गर्ने नीति छैन । हामी राष्ट्रघातका विरुद्ध लड्छौँ । विकृतिका विरुद्ध लड्छौँ । राष्ट्रघातीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालाैँ ।
यस विषयमा दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु : कास्मिरको कुरा पनि राज्यसत्तासँग जोडिएकै कुरा हो । भारतमा जनताको सत्ता बन्छ भने स्वेच्छिक ढङ्गले सबै एक ठाउँमा रहने कुरा स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर आज भारत साम्राज्यवादी छ । त्यसले खाइरहेको छ । हामीले के भनेका छाैँ भने भारतको प्रवृत्ति मूलभूत रूपले अब साम्राज्यवादी भैसक्यो । कमजोरलाई खाने उसको नीति छ । त्यहीअन्तर्गत उसले कास्मिरलाई खाएको हो। जे सम्झौता गरे पनि सम्झौताको सार के थियो भने कास्मिरको आत्मसमर्पणवादी पुँजीपति वर्ग र भारतको पुँजीवादी वर्गबीचको गठजोडबाट नै त्यसलाई खाएका हुन् । हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने हरेक समुदाय, जाति र क्षेत्रका नागरिकहरू आफ्नो अधिकारका लागि लड्न स्वतन्त्र छन् । आफूलाई उत्पीडन भएको अनुभूति भएपछि स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्दछ र पाउँछन् भन्ने हो । भारत साम्राज्यवादी छ । पहिले विस्तारवादी थियो । अहिले त्यसको चरित्र साम्राज्यवादी छ । भारत कास्मिरको कुरा मात्र छैन, भारतमा सिक्किमको कुरा छ । मणिपुरको कुरा छ । त्यहाँ हरेक हिसाबले हेर्दा जति समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू जातीय र राष्ट्रिय समस्याहरू नै हुन् ।
अहिले हामीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रहार गर्ने हतियारका रूपमा चन्दाको विषय पनि उठाइएको छ । हामीलाई कसैले तीतो तरिकाले, नसुहाउने तरिकाले, रूखो तरिकाले पनि भनेका छन्– अँध्यारोमा बस्ने, चक्कु देखाउने, पैसा उठाउने भन्ने कुरा पनि भनेको सुनियो तर यसको जबाफ हामीले होइन, हाम्रा बुद्धिजीवी साथीहरू, स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूले आफ्नै तरिकाले दिनुभएको छ । हामीले मुख्य कुरा के भनेका छाैँ भने अहिले जनतालाई नेपालको क्रान्ति बुझेको जस्तो पनि नबुझेको जस्तो पनि यस्तो ठाउँमा गएर बसेको छ । आमजनतालाई क्रान्ति बुझेको जस्तो पनि नबुझेको जस्तो पनि छ । नेपालमा जनयुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी जनता धेरै छन् । नेपालका सबै क्रान्तिमा बुद्धिजीवी, कर्मचारीहरु कुनै न कुनै रूपले जोडिएका छन् । यी सबैलाई के छ भने क्रान्ति बुझेको जस्तो पनि परेको छ, नबुझेको जस्तो पनि परेको छ । हिजो त्यत्रो गरियो, अहिले किन आवश्यक पर्यो भन्नेजस्तो पनि छ । त्यसैले यसलाई राम्रोसँग बुझाउनका लागि राजनीतिक ढङ्गले एउटा अभियान चलाउने पनि हाम्रो कार्यक्रम छ । अर्को पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, नयाँ सदस्य भर्ती गर्ने, एकता पनि गर्ने, भ्रष्टाचार, लागूपदार्थ ओसार पसार, मानवतस्करी नेपालको ठूलो समस्या भैसक्यो । युवाहरूलाई नसा खुवाएर लठ्याउने यो ठूलो समस्या हो । लुटेरा दलालहरूले युवाहरूलाई लागूपदार्थमा फसाएर लुट्ने काम भएको छ । खुलेआम सडकमा वेश्यावृत्ति छ । यो सबैका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष चलाउन खोज्दैछौँ।
अर्को कुरा हाम्रा पहिलेका स्थायी समिति सदस्य र अहिलेका कार्यालय सदस्य सुदर्शन, प्रज्वलन, बन्धुलगायत छ–सात सय साथीहरू जेल र हिरासतमा हुनुहुन्छ र निर्भीकतापूर्वक जेलको मोर्चाबाट लडिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु । जेल र हिरासतमा भएका साथीहरूलाई कुनै पनि हालतमा टसमस नहुनू भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु । क्रान्तिकारी मान्छे जहाँ पनि क्रान्तिप्रति इमानदार भएर लड्ने कुरा हो । हामी बाहिरबाट लड्छौँ, तपाईंहरू भित्रबाट लड्नुहोस् । हाम्रो आदर्शलाई थोरै पनि आँच आउन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। आज हजाराैँ–लाखौँ जनता लामबद्ध छन् । तपाईंहरू कुनै पनि हालतमा नआत्तिनू र विचलित नहुनू । क्रान्ति भन्ने कुरा धेरै उतारचढावहरू पार गरेर जाने कुरा हो । पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । यो क्रान्ति जनताको क्रान्ति हो र यो विजयी भैछाड्नेछ । अरू सबै फर्जी बाटाहरू हुन् र ठग बाटाहरू हुन् । अरू सबै बाटाहरू भ्रमका बाटाहरू हुन । जनताको साँचो र सत्य मार्ग भनेको क्रान्तिको यही मार्ग हो । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने बाटो हो ।
रातो खबर आजको नेपालमा परिवर्तनको संवाहक हो । यसबाट हाम्रो पार्टीका धारणाहरू जनताका बीचमा पुर्याउने अवसर दिनुभएको छ । यसका लागि तपाईंहरुको टिमलाई पार्टीका तर्फबाट धेरैधेरै धन्यवाद दिन्छु ।२०७६, २७ भाद्र शुक्रबार ०७:२३ ई-रातो खबरबाट साभार गरीएको हो ।
कुराकानी, भिडियो चौतारी, मूल खबर
Prevनेपालको इतिहास : एक माक्र्सवादी दृष्टिकोण
Nextतीनतहका सरकारी प्रयास विफल